रेनोका २५ सय गाडी बिक्री, पोखरामा कस्तो छ अवस्था ? – Arthik Awaj
रेनोका २५ सय गाडी बिक्री, पोखरामा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं । रेनो गाडीहरु नेपाली बजारमा लोकप्रिय बनेका छन् । नेपाल भित्रिएको छोटो समयमा रेनो गाडीले बजार विस्तारलाई तिब्र बनाइरहेको छ । नेपाली बजारमा २ सय ५ सय वटा रेनोका गाडी बिक्री भएका छन् । नेपालमा रेनो गाडीको आधिकारिक वितरक एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले एक समारोहका बीच २५ सयौं ग्राहकलाई रेनो गाडीको चाबी हस्तान्तरण गरेको छ ।
रेनो इन्डियाका भाइस प्रेसिडेन्ट थोमस डुब्रुएलले रेनोको नक्साल सोरुममा आयोजित एक कार्यक्रममा सो चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् । ग्राहकलाई रेनो क्विड कार हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालमा रेनोका डस्टर, क्विड र क्याप्चर कार उपलब्ध छन ।
विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले सन् २०१६ देखि नेपाली बजारमा रेनोका गाडी बिक्री–वितरण थालेको थियो । छोटो समयमै नेपालका टप थ्री कार ब्रान्डमा रेनो पर्न सफल भएको कम्पनीको दावी छ । सन् २०१५ मै कम्पनीले १२५ देशमा २८ लाख गाडी बिक्री गर्न सफल भएको थियो ।
रेनोको गाडीका लागि पोखरा क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता जोन्छे ट्रेडर्स हो । पोखरा तथा आसपासका जिल्लामा रेनो गाडीप्रति निकै आकर्षण देखिएको जोन्छेका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रकुमार बाटाजूले जानकारी दिए । ‘पोखरा तथा आसपासका सडकमा रेनो गाडी चढ्नेहरु दिनप्रतिदिन बढेका छन्,’ उनले भने ।